AF Antsirabe : manamarika ny Herinandron’ny frankofonia | NewsMada
AF Antsirabe : manamarika ny Herinandron’ny frankofonia
Par Taratra sur 15/03/2016
Nanomboka ny talata teo, hatramin’ny asabotsy 19 marsa ho avy izao, ny fanamarihana ny Herinandron’ny teny frantsay sy ny frankofonia, atao ao amin’ny Alliance française Antsirabe( Afa). Hetsika ara-kolotsaina samihafa no nomanina hanamarihana azy ity, toy izay niseho tamin’ny tolakandron’ny talata sy alarobia lasa teo.
Hita tamin’izany ny fampirantiana sariitatra na” bande dessinée (BD)”, sanganasan’i Geneviève Marot, manana ny lazany amin’izany, ary nampitondrainy ny lohateny hoe “Sous le grand tamarinier de Betoiky”, nalaina tao amin’ny “Carnet de voyage à la BD”, novokarin’i Geneviève Marot ihany. Mitantara ny fahazazan’i Jean Piso, mpitendry
angorodao ao amin’ny tarika Ny Malagasy orkestra ity sariitatra ity ary azo adika hoe: “Teo ambany alokalok’ilay hazobemadiron’i Betioky”.
Taorian’ity fampiratiana ity, natao tao amin’ny Afa ihany koa ny fampisehoana rindran-kira an-tsehatra nampitondrana ny lohateny hoe: “Concert dessiné”, tantara niompana indrindra tamin’ny fahazazan’i Jean Piso. Narahanan’ity farany, amin’izao izy efa lehibe izao, tamin’ny fitendrena angorodao izany. Nitohy ny asabotsy teo ny hetsika samihafa. Hanamarika ny fanakatonana tanteraka ny « Herinandron’ny teny frantsay sy ny frankofonia », ny asabotsy izao mbola any Antsirabe ihany, ny fampisehoana tantara tsangana mitondra ny lohateny hoe:“Enfants C(h)oeurs », nosoratana sy holalaovin’i Fela Razafiarison sy ny namany. Hiompana indrindra amin’ny fifehezana tsara ny teny frantsay izy io ka hifamalian’ny tarika roa mpiangaly ny antsoina hoe “Théâtre contemporain”.